MyYappyDog: အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက် Social CRM | Martech Zone
MyYappyDog: အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များအတွက် Social CRM
ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 2, 2014 ကြာသပတေးနေ့, ဇွန်လ 18, 2015 Douglas Karr
Indianapolis မှာနည်းနည်းလေးမှဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ startup အသစ်တစ်ခုရှိတယ် အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်များ၎င်းကိုခေါ်သည် အကြှနျုပျ၏ Yappy ခွေး။ ရိုးရှင်းသောဆက်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုအားသုံးစွဲသူများကြားဆက်ဆံရေးမစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်ပါက My Yappy Dog ဟုခေါ်သည့် Social CRM ကိုသင်ရရှိသည်။
အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်အေဂျင်စီဖောက်သည် ၄ ​​ဦး အနက် ၃ ဦး ကသူတို့၏ကိုယ်စားလှယ်နှင့်ပြန်လည်စီးပွားရေးလုပ်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်၊ သို့သော် ၁၅% ကသာလုပ်ဆောင်သည်။ Dawn Schnaiter, ပူးတွဲတည်ထောင်သူ အကြှနျုပျ၏ Yappy ခွေး.
အကယ်၍ အေးဂျင့်များသည် ၄ ​​င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အဆက်အသွယ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်တတ်နိုင်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုသာရှိပါကထိုသူများသည်နေရာပြောင်းရွှေ့လာသောအခါ၊ ပိုကြီးသည့်အိမ်ကြီးသို့ရောက်ရှိခြင်း၊ သို့မဟုတ်သူတို့၏မိသားစုသို့မဟုတ်သူငယ်ချင်းများကရောင်းရန်ကြိုးစားနေချိန်တွင်သူတို့ရရှိနိုင်သည်။ အေးဂျင့်လုပ်ပေးရမည့်အရာများသည်အခါအားလျော်စွာထိတွေ့မှုနှင့်… အကြှနျုပျ၏ Yappy ခွေး သူတို့လုပ်ကြစို့။
အဆိုပါ လူမှုရေး CRM ပလက်ဖောင်း သင်၏လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများ၊ ဓာတ်ပုံများကိုလက်ခံရန်လူမှုရေးစာပုံးများ၊ အီးမေးလ်အမြောက်အများကိုစည်းရုံးခြင်းနှင့်တိုင်းတာနိုင်ခြင်းနှင့်အကြောင်းအရာမန်နေဂျာများအားလုံးကိုတင်ရန်စွမ်းရည်ရှိသည်။ သုံးစွဲသူများ၏ခွင့်ပြုချက်များနှင့်အတူမြင်နိုင်၊ မမြင်နိုင်သည့်လက်ထောက်အကောင့် (အပိုငွေမပါပါ) အသုံးပြုခြင်းဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ အကောင်းဆုံးကတော့သင့်ရဲ့လှုပ်ရှားမှု၊ အရောင်းနဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအကြောင်းအစီရင်ခံခြင်းပါ ၀ င်ပါတယ်။
၃ Yap ကိုနှိပ်ပါ။
ကုမ္ပဏီကြီးအများစုကဲ့သို့ပင် My Yappy Dog ကိုအရောင်းမြှင့်တင်ရန်ထုတ်လုပ်သည့်မန်နေဂျာဖြစ်သည့် Dawn the Real Estate Agent - Riann Stroud လိုအပ်သောသူကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အဖြေတစ်ခုရနိုင်မည်မဟုတ်သောကြောင့်သုံးစွဲသူများကစိတ်ပျက်ခဲ့ကြသောကြောင့်တည်ဆောက်ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။
ငါ၏အ Yappy ခွေးတစ် ဦး ချင်းစီ, အသင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေးထားပါတယ် စျေးနှုန်း!
မှတ်စု: အဆိုပါ အကြှနျုပျ၏ Yappy ခွေး ပလက်ဖောင်းသည်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြီးသား interface နှင့်အတူမည်သည့်ကန်ထရိုက်တာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူအတွက်မဆိုအလွန်ကောင်းမွန်သည်။
Tags: အီးမေးလ်စျေးကွက်မင်္ဂလာပါအိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ဝန်ဆောင်မှုပေးလူမှုရေး CRMလူမှုရေးဖောက်သည်ကြားဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုလူမှုရေးစာပုံးလူမှုရေးထုတ်ဝေသူ
ဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ဆိုတာဘာလဲ။ အချို့သောဥပမာများနှင့်အဘယ်ကြောင့်သူတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ (သို့မဟုတ်မ)